Vaovao - Toerana maro any Shina no mametra ny herinaratra, efa nanome baiko momba ny vokatra tadiavinao ve ianao?
Toerana maro any Shina no mametra ny herinaratra, efa nanome baiko momba ny vokatra tadiavinao ve ianao?
DONGGUAN, Sina - Ny fanapahana herinaratra ary na ny fahatapahan-jiro aza dia nanemotra na nanidy orinasa maro manerana an'i Chine tato ho ato, ary nampisy fandrahonana vaovao ho an'ny firenena mihisatra ary mety hitrandraka rojom-panolorana eran-tany alohan'ny vanim-potoanan'ny varotra Krismasy any Andrefana.
Betsaka ny antony tsy ampy tampoka ny herinaratra any amin'ny ankamaroan'ny Sina. Betsaka ny faritra eto amin'izao tontolo izao no misokatra taorian'ny fanidiana nateraky ny areti-mifindra, nampitombo ny fangatahana ireo orinasa fanondranana noana any Shina.
Naminany ny mpahay toekarena fa ny fanelingelenana amin'ny famokarana any amin'ny orinasa sinoa dia hanasarotra ny fivarotana maro any Andrefana hametraka talantalana foana ary afaka mandray anjara amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny volana ho avy.
Tsy mazava ny faharetan'ny herinaratra. Ny manam-pahaizana any Sina dia naminavina fa ny tompon'andraikitra dia manonitra amin'ny alàlan'ny familiana herinaratra lavitry ny indostria mavesatra be angovo toa ny vy, simenitra ary aliminioma, ary nilaza fa mety hamaha ny olana izany.
Ny State Grid, ilay mpaninjara fahefana tantanan'ny governemanta, dia nilaza tamin'ny fanambarana ny alatsinainy teo fa hiantoka ny famatsiana “ary hitandrina fatratra ny faran'ny fiveloman'ny olona, ​​ny fampandrosoana ary ny fiarovana.”
Ankoatry ny arintany, ny tohodrano elektrika dia manome ny ankamaroan'ny sisa amin'ny herin'i Shina, raha ny turbinina, ny tontolon'ny masoandro ary ny toby famokarana angovo nokleary dia mitana andraikitra lehibe.
Ny fikorontanana noho ny tsy fahampian'ny herinaratra dia efa tsapa tao Dongguan, tanàna iray afovoan'ny fehikibo atsimo atsinanana any Shina. Ny orinasany dia mamokatra ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitaovana elektronika ka hatramin'ny kilalao ka hatramin'ny akanjo ba ba nataony.
Ny tompon'andraikitra mpampita herinaratra eo an-toerana ao Houjie, tanàna any avaratrandrefan'i Dongguan, dia namoaka didy hanidiana herinaratra amin'ireo orinasa maro hatramin'ny alarobia ka hatramin'ny alahady. Ny alatsinainy maraina dia nitatra farafaharatsiny hatramin'ny alin'ny talata alina ny fampiatoana ny serivisy elektrika indostrialy.
Noho ny fihenan'ny herinaratra dia nitatra ny fotoana famokarana ary nitombo koa ny akora. Jianer Shoes Company dia mamokatra kiraro fanatanjahan-tena, kiraro, kiraro mahazatra, kiraro fihazakazahana, kiraro, kiraro baskety, kiraro kitra, baoty ary vokatra hafa. Tohano ny marika OEM sy serivisy fanaingoana ohatra. Jianer Shoes Company dia mamporisika fa raha te-hanamboatra kiraro ianao dia mila mifandray aminay haingana araka izay tratra. Raha vao manamafy ny filaminana ianao ary miomana amin'ny famokarana, dia vao mainka mahomby amin'ny fandefasana vokatra ara-potoana. Ary noho ny fiakaran'ny vidin'ny akora sy ny saram-pitaterana tsy tapaka, dia nanoro hevitra anao izahay mba hametraka baiko mialoha mba hitehirizana ny vidiny. Raha mbola mitady mpanamboatra kiraro namboarina ianao, azafady mifandraisa aminay, manana traikefa amin'ny indostrialy mihoatra ny 15 taona izahay, manana ny ekipa misy anay sy ny ekipa matihaninay, hanomezana anao tolotra tokana.
Fotoana fandefasana: Oct-06-2021